INQUBOMGOMO YOBUMFIHLO - BancaNEO
Usuku lokuqala ukusebenza: 1st July 2021
Uyemukelwa Kunqubomgomo Yemfihlo ye www.bancaneo.org ephethwe futhi eqhutshwa yi-MY NEO GROUP TRUST.
Le Nqubomgomo Yobumfihlo iqukethe uhlolojikelele mayelana nokuqoqwa, ukusetshenziswa nokudalula idatha yakho yomuntu siqu. Uma ngabe ulwazi luhlanganisa eyodwa kuphela yezinsizakalo zethu sizokukhomba lokhu ngokucacile. Ukuze ubonise inhlonipho kumalungelo akho omuntu siqu obumfihlo, i-MY NEO GROUP TRUST icubungula idatha yomuntu siqu eqoqiwe ngokuhambisana noMthetho Wokuvikelwa Okusemthethweni Kwedatha Yakho YeRiphabhulikhi yase-Italy, I-General Data Protection Regulation kanye nezinye izenzo ezingokomthetho ezifana I-Directive No. 95/46/EC yePhalamende LaseYurophu. Abasebenzi, ama-ejenti, nezinye izinhlangano ezikwazi ukufinyelela idatha yakho yomuntu siqu zizinikele ekuqinisekiseni ukuphepha kwayo ngisho nalapho kunqanyulwa ubudlelwano benkontileka.
Sicela ufunde le Nqubomgomo Yobumfihlo ngokucophelela njengoba isebenza lapho usebenzisa Izinsizakalo zethu noma uvakashela Iwebhusayithi yethu noma usebenzisa i-App yethu. Sibheka ubumfihlo nokuvikelwa kwemininingwane ngokungathi sína futhi sizibophezele ekuphatheni imininingwane yomuntu yalabo esihlanganyela nabo, kungaba amakhasimende, abahlinzeki noma osebenza nabo, ngokuzibophezela nangendlela ehlangabezana nezimfuneko zomthetho zamazwe esisebenza kuwo.
I-MY NEO GROUP TRUST ("Bancaneo”,“ Us ”,“ we ”,“ our ”) ubhekele ukuqoqwa, ukusetshenziswa nokudalulwa kwemininingwane yakho yangasese. Uma unemibuzo mayelana nokuthi siyivikela kanjani noma siyisebenzisa kanjani idatha yakho, sicela usithumele i-imeyili ku: [i-imeyili ivikelwe].
Idatha yomuntu siqu engahle iqoqwe
Sizoqoqa imininingwane elandelayo mayelana nawe:
Imininingwane osinika yona:
Ungasinika imininingwane, kufaka phakathi imininingwane yomuntu, mayelana nawe lapho ubhalisa ukusebenzisa Izinsizakalo zethu, isb igama lakho nekheli le-imeyili. Lokhu kufaka nemininingwane oyinikezayo ngokusebenzisa kwakho ukuqhubeka kokusebenzisa Izinsizakalo zethu, ukubamba iqhaza kumabhodi wezingxoxo noma eminye imisebenzi yezokuxhumana kwiWebhusayithi yethu noma kuhlelo lokusebenza, faka umncintiswano, ukukhushulwa noma inhlolovo, nalapho ubika inkinga ngezinsizakalo zethu. Imininingwane osinika yona ingafaka igama lakho, ikheli, ikheli le-imeyili, inombolo yocingo, imininingwane yezezimali (kufaka phakathi ikhadi lesikweletu, ikhadi lesikweletu, noma imininingwane ye-akhawunti yasebhange), isizathu sokukhokha, indawo okuyo, inombolo yokuphepha komphakathi, incazelo yomuntu siqu nesithombe .
Singahle futhi sidinge imininingwane eyengeziwe yokuhweba kanye / noma yokuhlonza kusuka kwisib.
Ngokuhlinzeka ngemininingwane yomuntu siqu yanoma ngubani (ngaphandle kwakho) ngokwesibonelo ongathola izinkokhelo ezivela kithi njengengxenye yokusebenzisa kwakho Izinsizakalo zethu, uthembisa ukuthi uthole imvume kulowo muntu ukudalula imininingwane yakhe kithi, kanye nemvume yakhe ekuqoqweni kwethu, ukusetshenziswa nokudalulwa kwedatha yomuntu siqu, ngezinhloso ezibekwe kule Nqubomgomo Yobumfihlo.
Imininingwane esiyiqoqayo ngawe. Mayelana nokusebenzisa kwakho Izinsizakalo zethu, singaqoqa ngokuzenzakalela imininingwane elandelayo, eminye yayo engaba noma ifake imininingwane yomuntu siqu:
imininingwane yokuthengiselana okwenzayo lapho usebenzisa Amasevisi wethu, kufaka phakathi indawo lapho umsebenzi uvela khona;
imininingwane yezobuchwepheshe, kufaka phakathi ikheli le-internet protocol (IP) elisetshenziselwa ukuxhuma ikhompyutha yakho kwi-Inthanethi, imininingwane yakho yokungena ngemvume, uhlobo lwesiphequluli kanye nohlobo, ukusethwa kwezoni yesikhathi, izinhlobo nezinhlobo zokuhumusha zesiphequluli, uhlelo lokusebenza nepulatifomu;
ulwazi olumayelana nokuvakasha kwakho, kufaka phakathi i-Uniform Resource Locators (URL) egcwele yokuchofoza ukuze ungene, uphinde ungene kusuka kuwebhusayithi yethu noma kuhlelo lokusebenza (kufaka phakathi usuku nesikhathi); imikhiqizo oyibukile noma oyiseshile; izikhathi zokuphendula ikhasi, amaphutha wokulanda, ubude bokuvakasha emakhasini athile, imininingwane yokuxhumana kwamakhasi (njengokuhamba, ukuchofoza, nokwedlulisa amagundane), nezindlela ezisetshenziselwa ukubhekabheka kude nekhasi nanoma iyiphi inombolo yocingo esetshenziselwe ukubiza inombolo yethu yokuxhaswa kwamakhasimende .
Imininingwane esiyithola kweminye imithombo. Singathola imininingwane ngawe uma usebenzisa amanye amawebhusayithi esiwasebenzisayo noma amanye amasevisi esiwanikezayo. Sisebenza futhi ngokubambisana nabantu besithathu futhi singathola imininingwane ngawe evela kubo.
amabhange owasebenzisela ukudlulisa imali kithi azosinikeza imininingwane yakho eyisisekelo, njengegama nekheli lakho, kanye nemininingwane yakho yezezimali efana nemininingwane ye-akhawunti yakho yasebhange;
Ozakwethu bebhizinisi bangasinikeza igama lakho nekheli, kanye nemininingwane yezezimali, efana nemininingwane yokukhokha ikhadi;
amanethiwekhi wokukhangisa, abahlinzeki be-analytics nabahlinzeki bemininingwane yokusesha bangasinikeza imininingwane engaziwa ngawe, njengokuqinisekisa ukuthi uyithole kanjani iwebhusayithi yethu;
ama-ejensi wokukhomba ngesikweletu awasinikeli ngemininingwane yakho ephathelene nawe kepha angasetshenziswa ukufakazela imininingwane osinikeze yona.
Imininingwane evela kumanethiwekhi omphakathi wezokuxhumana. Uma ungena kuzinsizakalo zethu usebenzisa i-akhawunti yakho yemidiya yokuxhumana nomphakathi (isibonelo, i-Facebook noma i-Google) sizothola ulwazi olufanele oludingekayo ukunika amandla amasevisi wethu nokukuqinisekisa. Inethiwekhi yezokuxhumana izosinikeza ukufinyelela kolwazi oluthile obanikeze lona, ​​kufaka phakathi igama lakho, isithombe sephrofayili nekheli le-imeyili. Sisebenzisa lolo lwazi, kanye neminye imininingwane osinikeza yona ngqo lapho ubhalisa noma usebenzisa Amasevisi wethu, ukudala i-akhawunti yakho nokuxhumana nawe ngolwazi, imikhiqizo kanye nezinsizakalo ozifuna kithi. Ungase futhi ukwazi ukucela ngokuqondile ukuthi sikwazi ukufinyelela koxhumana nabo ku-akhawunti yakho yezokuxhumana ukuze ukwazi ukuthumela isixhumanisi sokudlulisela kumndeni wakho nakubangane. Sizosebenzisa, sidalule futhi sigcine lonke lolu lwazi ngokuhambisana nale Nqubomgomo Yobumfihlo.
Imikhiqizo nezinsizakalo zethu ziqondiswe kubantu abadala abaneminyaka engu-18 nangaphezulu futhi azihloselwe izingane. Asiqoqa ulwazi ngamabomu kuleli qembu leminyaka. Ingxenye yenqubo yokuqinisekisa ivimbela Bancaneo ukuqoqa idatha enjalo. Uma noma yiluphi ulwazi luqoqwa enganeni ngaphandle kokuqinisekiswa kwemvume yomzali, luzosuswa.
Siluvikela kanjani ulwazi lwakho
Sisebenzisa iseva evikelekile ukugcina imininingwane yakho yangasese. Yonke imininingwane osinikeza yona igcinwa kumaseva ethu aphephile.
Njengoba uzokwazi, ukudluliswa kolwazi nge-inthanethi akuphephile ngokuphelele. Yize sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuvikela imininingwane yakho, asikwazi ukuqinisekisa ukuphepha kwemininingwane yakho ngesikhathi sokudlulisa, futhi noma ikuphi ukudluliswa kuyingozi yakho. Lapho sesithole imininingwane yakho, sizosebenzisa izinqubo eziqinile nezici zokuphepha ukuzama ukuvimbela ukufinyelela okungagunyaziwe.
Siqhubeka sifundisa futhi siqeqesha abasebenzi bethu ngokubaluleka kokugcina imfihlo nokuyimfihlo kwemininingwane eyimfihlo yamakhasimende. Sigcina izivikelo zomzimba, ze-elekthronikhi nezenqubo ezihambisana nemithetho kanye nemithethonqubo efanele ukuvikela imininingwane yakho.
Ukusetshenziswa okwenziwe kolwazi
Sisebenzisa imininingwane yakho ngezindlela ezilandelayo:
ukwenza izibopho zethu eziphathelene nesivumelwano sakho nathi ukukunikeza imininingwane, imikhiqizo nezinsizakalo;
ukuhambisana nanoma yiziphi izidingo zomthetho kanye / noma zokulawula ezibandakanya imithetho engaphandle kwezwe ohlala kulo noma ukuhambisana nanoma iyiphi inqubo yezomthetho;
ukukwazisa ngoshintsho Ezinsizakalweni zethu;
ukwenza ngendlela oyifisayo Imisebenzi yethu nolwazi esilunikeza lona, ​​nokubhekana nezidingo zakho - njengezwe lakho lamakheli nomlando wokuthengiselana. Isibonelo, uma uvame ukuthumela imali kusuka kolunye uhlobo lwemali iye kolunye, singasebenzisa lolu lwazi ukukwazisa ngezibuyekezo ezintsha zomkhiqizo noma izici ezingaba wusizo kuwe;
njengengxenye yemizamo yethu yokugcina Imisebenzi yethu iphephile futhi ivikelekile;
ukuphatha Imisebenzi yethu nokusebenza kwangaphakathi, kufaka phakathi ukuxazulula inkinga, ukuhlaziywa kwedatha, ukuhlolwa, ukucwaninga, izibalo kanye nezinhloso zokuhlola;
ukwenza ngcono imisebenzi yethu nokuqinisekisa ukuthi yethulwa ngendlela esebenza kahle kakhulu;
ukukala noma ukuqonda ukusebenza kokukhangisa esikunikezayo kanye nokuletha ukukhangisa okufanele kuwe;
ukukuvumela ukuthi ubambe iqhaza kuzici ezisebenzisanayo zezinsizakalo zethu, lapho ukhetha ukwenza kanjalo;
ukusivumela ukuthi silandele amakhambi atholakalayo noma sinciphise umonakalo esingawuthola nokuphoqelela imigomo nemibandela yethu
ukuze sikwazi ukukunikeza imininingwane mayelana nemizamo yethu yokukhuthaza inqubomgomo yomphakathi.
ukukunikeza ulwazi mayelana nezinye izimpahla nezinsizakalo ezifanayo esizinikezayo;
ukukunikeza, noma ukuvumela abantu besithathu abakhethiwe ukukunikeza, ngolwazi mayelana nezimpahla noma izinsizakalo esibona sengathi zingakuthakazelisa; noma
ukuhlanganisa ulwazi esiluthola kweminye imithombo nolwazi osinika lona nolwazi esiluqoqa ngawe. Singalusebenzisa lolu lwazi kanye nemininingwane ehlanganisiwe ngezinhloso ezibekwe ngaphezulu (kuya ngezinhlobo zolwazi esizitholayo).
Ukudalulwa kolwazi lwakho
Singabelana ngolwazi lwakho nabantu besithathu abakhethiwe kubandakanya:
abaxhumana nabo, abalingani bebhizinisi, abahlinzeki kanye nosonkontileka abancane bokwenza nokusebenza kwanoma iyiphi inkontileka esisebenza nabo noma nawe;
abakhangisi kanye namanethiwekhi wokukhangisa kuphela ukukhetha nokuhambisa izikhangiso ezifanele kuwe nakwabanye;
ama-analytics kanye nabahlinzeki bezinjini zokusesha abasisizayo ekwenzeni ngcono nokwenza kahle indawo yethu; futhi
izinhlangano zethu zeqembu noma izinkampani ezingaphansi
Singadalula imininingwane yakho kubantu besithathu:
esimweni lapho sithengisa noma sithenga noma yiliphi ibhizinisi noma izimpahla, lapho singadalula imininingwane yakho yomuntu ozoba ngumthengisi noma umthengi walelo bhizinisi noma izimpahla;
uma singaphansi kwesibopho sokudalula noma sabelane ngemininingwane yakho ukuze sihambisane nanoma yisiphi isibopho esisemthethweni. Lokhu kubandakanya ukufaka imininingwane nezinye izinkampani nezinhlangano ngenhloso yokuvikela ukukhwabanisa nokunciphisa ubungozi besikweletu;
ukusisiza ekwenzeni noma ngokubambisana ekuphenyeni ukukhwabanisa noma enye into engekho emthethweni lapho sikholwa ukuthi kunengqondo futhi kufanelekile ukwenza njalo;
ukuvimbela nokubona ukukhwabanisa noma ubugebengu;
ukuphendula ukubizelwa enkantolo, incwadi egunyazayo, incwadi yenkantolo, noma enye Bancaneo okufunwa ngumthetho;
ukuhlola ubungozi bezezimali kanye nomshuwalense, nokuvikela ukusebenza kwethu kanye nalokho kwanoma yibaphi babahlanganyeli bethu;
ukusivumela ukuthi silandele amakhambi atholakalayo noma sinciphise umonakalo esingawuthola
ukubuyisa isikweletu noma maqondana nokuhluleka ukukhokha izikweletu; futhi
ukuthuthukisa ubudlelwano bamakhasimende, izinsizakalo nezinhlelo.
Asinalo uhlu olushicilelwe lwabo bonke abantu besithathu esabelana nabo imininingwane yakho, ngoba lokhu kuzoxhomeka kakhulu ekusebenziseni kwakho okuthile kweMisebenzi yethu. Kodwa-ke, uma ungathanda ukwaziswa okwengeziwe mayelana nokuthi sabelane nobani ngemininingwane yakho, noma sinikezwe uhlu oluthile oluqondiswe Kuwe, ungacela lokhu ngokubhalela [i-imeyili ivikelwe].
Ukwabelana nokugcina idatha yakho yomuntu siqu
Imininingwane esiyiqoqa kuwe ingadluliselwa, futhi igcinwe, endaweni engaphandle kwase-United States. Ingasetshenziswa futhi ngabasebenzi abasebenza ngaphandle kwase-US abasebenzela thina noma omunye wabahlinzeki bethu. Abasebenzi abanjalo mhlawumbe bahlanganyele, phakathi kwezinye izinto, ukugcwaliswa kwe-oda lakho lokukhokha, ukucubungula imininingwane yakho yokukhokha nokuhlinzekwa kwezinsizakalo zokusekela. Ngokuthumela imininingwane yakho, uyavuma lokhu kudlulisa, ukugcina noma ukucubungula. Sizothatha zonke izinyathelo ezidingekayo ukuqinisekisa ukuthi idatha yakho iphathwa ngokuphepha nangokuhambisana nale Nqubomgomo Yobumfihlo.
Sisebenzisa amafayela amancane (aziwa njengamakhukhi) ukuhlukanisa nabanye abasebenzisi, bona ukuthi ulisebenzisa kanjani isayithi lethu nemikhiqizo yethu ngenkathi ikunikeza okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu. Kusenza futhi sikwazi ukuthuthukisa amasevisi ethu, ukuthola imininingwane eningiliziwe ngamakhukhi nobunye ubuchwepheshe esibusebenzisayo nezinhloso esizisebenzisela zona zibona Cookie yemfihlo.
Ukugcinwa kwemininingwane yakho
Njengesikhungo sezimali esilawulwayo, Bancaneo umthetho udinga umthetho ukugcina imininingwane yakho yomuntu siqu neyokuthengiselana ngale kokuvalwa kwe-akhawunti yakho nathi, bona amalungelo akho ngezansi. Imininingwane yakho itholakala kuphela ngaphakathi ngesidingo sokwazi isisekelo, futhi izotholakala noma icutshungulwe kuphela uma kunesidingo.
Sizohlala sisusa idatha engasadingeki ngumthetho ofanele noma amandla esisebenza kuwo.
Amalungelo Wokuvikelwa Kwemininingwane Ngaphansi Kwe-GDPR
Bancaneo uzibophezele ekuqinisekiseni ukucubungula okulungile nokusobala. Kungakho kubalulekile kithi ukuthi izihloko zedatha azikwazi ukusebenzisa ilungelo lazo lokwenqaba kuphela kepha futhi namalungelo alandelayo lapho izidingo zomthetho ezifanele ziyaneliseka:
Ilungelo lokuthola ulwazi, Art. I-15 ye-GDPR
Ilungelo lokulungiswa, Art. 16 kwe-GDPR
Ilungelo lokususwa ("Ilungelo lokukhohlwa"), Ubuciko. I-17 ye-GDPR
Ilungelo lokukhawulela ukucubungula, Ubuciko. I-18 ye-GDPR
Ukudluliswa kwedatha kwesokudla, i-Art. Ama-20 we-GDPR
Ilungelo lokuphikisa, Ubuciko. 21 we-GDPR
Ukusebenzisa ilungelo lakho, sicela uxhumane nathi njengoba kukhonjisiwe esigabeni esithi "Xhumana Nathi" ngezansi.
Ukuze ukwazi ukucubungula isicelo sakho, kanye nezinjongo zokukhomba, sicela wazi ukuthi sizosebenzisa imininingwane yakho ngokuya ngobuciko. 6 para. 1 (c) we-GDPR.
Unelungelo futhi lokufaka isikhalazo kuziphathimandla zokuphatha ngokulandela Ubuciko. I-77 GDPR ihlanganiswe nesigaba 19 GDPR.
California amalungelo ahlobene
Isaziso Somthetho Wobumfihlo Wabathengi baseCalifornia
Kulesi saziso, sibhekene nezidingo zokudalula ngaphansi kweCalifornia Consumer Privacy Act (i-CCPA) yezakhamizi zaseCalifornia. Lesi saziso kufanele sifundwe kanye neSitatimende Sobumfihlo futhi sisebenza kubo bonke abahlali baseCalifornia abavakashela iwebhusayithi yethu noma abasebenzisa Amasevisi wethu.
Ukuqoqwa Kwemininingwane Yomuntu kanye Nezinjongo Zokusebenzisa: Siqoqa, sisebenzise futhi sabelane ngemininingwane yomuntu siqu yabahlali baseCalifornia njengoba kuchaziwe ngenhla.
Umthetho Wobumfihlo Wabathengi waseCalifornia
Manje njengoba wazi ukuthi siqoqa kanjani, sisebenzisa kanjani futhi sabelana kanjani ngemininingwane yakho yangasese, i-CCPA inikeza abahlali baseCalifornia amalungelo athile maqondana nemininingwane yabo yomuntu siqu. Lesi sigaba sichaza amalungelo akho e-CCPA futhi sichaza nokuthi ungawasebenzisa kanjani lawo malungelo. Ngaphezu kwalokho, iCalifornia Shine the Light law (i-CA Civ. Ikhodi § 1798.83) idinga ukuthi sinikeze abahlali baseCalifornia, ngesicelo sabo, amagama namakheli abantu besithathu abathole imininingwane yabo kanye nemikhakha yolwazi lomuntu siqu eyabiwe.
Izakhamizi zaseCalifornia zinelungelo lokucela ukuthi iMM BITINVEST OU iveze ukuthi yiluphi ulwazi lomuntu siqu Bancaneo uqoqe, wasebenzisa, wadalula, futhi wathengisa ezinyangeni eziyi-12 ezedlule. Lapho nje sesitholile futhi siqinisekisa isicelo sakho esiqinisekisiwe somthengi, sizokudalula imininingwane edingekayo ngefomethi ephathekayo futhi efinyeleleka kalula, imvamisa kungakapheli izinsuku ezingama-45 zokucela. Ungenza isicelo somthengi esiqinisekisiwe sokufinyelela noma ukuphatheka kwedatha kabili esikhathini esiyizinyanga eziyi-12.
Lapho sihlinzeka ngemininingwane ngaphansi kwelungelo lokwazi, sizofaka:
Izigaba zolwazi lomuntu siqu eziqoqwa yibhizinisi mayelana nomthengi futhi lazidalula noma lazithengisa ngenhloso yebhizinisi
Izigaba zemithombo yolwazi lomuntu siqu lomthengi
Inhloso yebhizinisi noma yezohwebo yokuqoqa nokuthengisa imininingwane yomuntu siqu yomthengi
Izigaba zanoma imuphi umuntu wesithathu ibhizinisi elihlanganyela naye imininingwane yomuntu siqu yomthengi noma okuthengiswa kuye imininingwane yomuntu siqu
Izingcezu ezithile zolwazi lomuntu siqu ziqoqiwe mayelana nomthengi
Izakhamizi zaseCalifornia nazo zinelungelo lokucela ukususwa kwedatha yazo yomuntu siqu, ngokuya ngokuhlukile, futhi kungenzeka zingabandlululwa ngoba zisebenzisa amalungelo azo ngaphansi koMthetho Wobumfihlo Wabathengi waseCalifornia. Singadinga ukuthi uhlinzeke ngemininingwane yakho eyengeziwe ukuqinisekisa ubuwena ngaphambi kokucubungula isicelo sakho; kungenzeka singasisebenzisi isicelo sakho uma sehluleka ukuqinisekisa ubunikazi bakho.
Izakhamizi zaseCalifornia nazo zinelungelo lokukhetha ukuthengisa imininingwane yomuntu. Ezinyangeni eziyishumi nambili ezedlule (12) Bancaneo akakathengisi imininingwane yomuntu.
Uma ungumhlali waseCalifornia futhi ungathanda ukwenza isicelo, sicela uthumele isicelo sakho, ngokubhala, ku: [i-imeyili ivikelwe].
Ungathumela ngalezi zindlela imibuzo yakho noma uzwakalise ukukhathazeka mayelana nakho BancaneoIzinqubomgomo nemikhuba yobumfihlo.
Izinsizakalo zethu, ngezikhathi ezithile, zingaqukatha izixhumanisi eziya noma ezisuka kumawebhusayithi wamanethiwekhi wozakwethu, abakhangisi nabasebenzisana nathi. Uma ulandela isixhumanisi esiya kunoma iyiphi yalezi webhusayithi, sicela wazi ukuthi lawa mawebhusayithi anezinqubomgomo zawo zobumfihlo nokuthi asemukeli noma yimuphi umthwalo wawo. Sicela uhlole lezi zinqubomgomo ngaphambi kokuthi uthumele imininingwane yomuntu kulawa mawebhusayithi.
Izinguquko zenqubomgomo yethu yobumfihlo
Ukuhambisana nemikhuba emihle, imithetho emisha, kanye nezinguquko endleleni esiluqoqa futhi silusebenzise ngayo ulwazi lomuntu siqu, singaguqula le Nqubomgomo Yobumfihlo ngezikhathi ezithile. Uma senza izinguquko kule Nqubomgomo Yobumfihlo, sizothumela Inqubomgomo Yobumfihlo ebukeziwe kuwebhusayithi bese sibuyekeza usuku oluthi “Lubuyekezwe Ekugcineni”. Ukuze uhlale unolwazi nganoma yiluphi ushintsho, sicela uhlole futhi ngezikhathi ezithile. Ukusebenzisa kwakho izinsizakalo zethu kulandela lezi zinguquko kusho ukuthi wamukela Inqubomgomo Yobumfihlo ebukeziwe. Uma ungathanda ukubuyekeza inguqulo yeNqubomgomo Yobumfihlo eyayisebenza ngokushesha ngaphambi kwalokhu kubukezwa, sicela uxhumane nathi ku- [i-imeyili ivikelwe].
Imibuzo, ukuphawula kanye nezicelo ezimayelana nale Nqubomgomo Yobumfihlo ziyamukelwa futhi kufanele zibhekiswe kuthimba lethu lobumfihlo lomhlaba wonke kuleli kheli le-imeyili elilandelayo - [i-imeyili ivikelwe].